कसरी आफ्नो क्यारियर सामाजिक परिवर्तन को उन्नत गर्न को लागी प्रयोग गर्न - शांति शिक्षा को लागी वैश्विक अभियान
जुलाई 24, 2020 जब, राय 0
(बाट पोस्ट गरिएको: फोर्ब्स.कॉम, जुलाई २, २०२०)
डेभिड जे। स्मिथ द्वारा
बढ्दो रूपमा, मलाई विद्यार्थी र ग्राहकहरूले सोधिरहेका छन् कि कसरी उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत मूल्यलाई एक क्यारियरमा लागू गर्दछन् जसले अर्थ परिवर्तन गर्दछ र सामाजिक परिवर्तनलाई अगाडि बढाउँदछ, तर सुरक्षा, स्थिर आय र राम्रो भविष्य पनि प्रदान गर्दछ।
अमेरिकी र विश्वव्यापी समाजमा असंख्य चुनौतिहरूको सामना गर्दै, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था सुधार गर्न योगदान पुर्‍याउनेहरू भावनात्मक हिसाबले रचनात्मक भूमिका खेल्ने उपायहरू खोज्दैछन्। धेरैका लागि यसमा हात उधारो दिन कामका लागि समय निकाल्नु समावेश हुन सक्छ, यो घर मा अनुहार मास्क बनाउने वा जुलुसमा आउने वा विरोधमा हुन सक्छ। कारण लिनु भनेको एक अत्यन्त व्यक्तिगत निर्णय हो। यो एक व्यक्तिको व्यक्तिगत मूल्य, प्रतिभा, क्षमता, समय र उर्जामा निर्भर गर्दछ। सामाजिक आवश्यकताको अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत अवसरले हामीलाई केहि गर्न अनुमति दिँदछ जसले हाम्रो जीवनमा अर्थ ल्याउँदछ र "कुराकानीमा हिँड्न", यसैले बोल्न।
व्यक्तिगत परिस्थितिहरू रोजगार, गिग, वा क्यारियरको निर्णयमा सबैभन्दा प्रभावशाली कारक हुन्। प्राय: हामीसँग के गर्ने र छनौट गर्न हामीसँग लक्जरी छैन: भाँडा वा कार भुक्तानको कारण छ; कलेज loansण तिर्नै पर्छ, र खाना टेबल मा राख्नु पर्छ। हामी वास्तविकतालाई कम गर्न सक्दैनौं जुन भुक्तान गरिएको कामले हाम्रो जीवन र हाम्रो परिवारलाई सँभाल्छ।
तर यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सामाजिक परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता र कामको आवश्यकता परस्पर विशेष हुनु हुँदैन। हामीले गरिरहेको काम जस्तोसुकै भए पनि हामी यसलाई त्यस्तो तरीकाले गर्न सक्दछौं जुन हाम्रो मूल्यमान्यताहरूसँग पign्क्तिबद्ध हुन्छ र हामी प्रतिबद्ध भएका कारणहरूका लागि अग्रिम हुन्छौं। हरेक काम र क्यारियरमा, सही कुरा गर्न ठाउँ हुन्छ, अक्सर अरूको जीवन सुधार गर्न सानो तर अर्थपूर्ण कदमहरू चाल्नु। कहिलेकाँहि हामी कसरी गर्छौं भन्ने बारे पनि हुन्छ। यदि हामी उदार, दयालु, निष्पक्ष र हाम्रो दृष्टिकोणमा इमानदार छौं भने, हामी विश्वलाई राम्रो ठाउँ बनाइरहेका छौं।
जो मानिसहरू अगाडि जान चाहन्छन् र तिनीहरूको सामाजिक मूल्यहरूलाई विशेष काम वा प्रयासमा उनीहरूको कामको साथ मिलाउन चाहन्छन्, म तपाईंलाई निम्न कुरा विचार गर्न अनुरोध गर्दछु:
पहिले तपाईंको पछाडिको आँगन जाँच गर्नुहोस्।
ओरो फिल्मको विजार्डमा डोरोथीले यस्तो प्रतिबिम्बित गरे, "यदि म फेरि मेरो मुटुको चाहना पाउन चाहन्छु भने म आफ्नै घरको पछाडिको बाहिरी भाग देख्दिन।" यदि यो विश्व परिवर्तन गर्न तपाईको हृदयको इच्छा हो भने, तपाई आफ्नै समुदायबाट सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर "ठूलो समस्या" संसारमा सामना हाम्रो ध्यान र चासो प्राप्त। यसले निराशता निम्त्याउन सक्छ: यदि म विकासशील मुलुकमा गरीबी हटाउन चाहन्छु भने म कसरी सुरू गर्ने? म यो बुझ्दछु, तर म सुझाव दिन्छु कि गरीबी पनि एक स्थानीय मुद्दा हो र यो तपाईंको आफ्नै समुदायले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। घरबाट सुरू गर्नुहोस्। त्यसोभए प्रश्न खडा हुन्छ: मेरो समुदायको कुन काममा ध्यान दिन आवश्यक छ? के म एक सामाजिक सेवा एजेन्सीको लागि काम गर्न सक्छु वा नाफामुखी हुने गरीबी मुद्दाहरूमा काम गरिरहेको छ?
तपाइँको हालको भूमिकामा के गर्न सक्नुहुन्छ विचार गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही यो गलत विश्वास छ कि केवल रोजगारहरु जुन सामाजिक समस्याहरु लाई ठीक गर्न को लागी डिजाइन गरीरहेका छन् सामाजिक परिवर्तनमा केन्द्रित छन्। म तर्क गर्दछु कि सबैजनाले महत्त्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यहरूको लागि आफ्नो काममा ठाउँ पाउन सक्छन्। खुद्रा व्यावसायिकहरूले उनीहरूको रोजगारदातालाई उत्पादन प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्न सक्छन् जुन वातावरणीय मानहरूसँग पign्क्तिबद्ध हुन्छन्। एक जो एक सेवा क्षेत्र मा काम गर्दछ - कपाल स्टाइलिस्ट, उदाहरण को लागी - आफ्नो कमाई को एक हिस्सा विशिष्ट कारणहरुमा दान गर्न सक्दछ। एक लेखाकारले एक गैर-नाफाको लागि आवश्यकताहरूको समर्थन गर्न स्वयम्सेवी समय समर्पित गर्न सक्दछ। एक IT पेशेवरले आफ्नो विशेषज्ञता प्रदान गर्न सक्दछन् न्याय न्याय सुधार गर्न कोशिस गर्दै सामाजिक न्याय समूहहरुलाई।
भुक्तानी गर्ने स्टाफमा स्वयंसेवकबाट कसरी संक्रमण गर्ने जान्नुहोस्।
धेरै आन्दोलनहरु स्वयम्सेवकहरु संग शुरू। रैली वा विरोध आयोजना गर्नेहरू कहिलेकाँही सहज रूपमा सँगै आउँछन्। तर प्राय: जसो मन र हृदयका मानिसहरूलाई मिलाउने समूह हुन्छ। यो प्रयास बढ्दै जाँदा, भुक्तान गर्ने कर्मचारीहरूसँगको प्रयासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने हुन सक्छ। यसको लागि अनुदान, कोष स or्कलन वा अनुदान मार्फत वित्तीय समर्थन प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ। एक पटक कोष प्राप्त भएपछि, त्यसपछि पेशेवर कर्मचारीहरू भाडामा लिन सकिन्छ। एक स्वयम्सेवकको रूपमा, तपाइँको प्रयासहरूले भुक्तान रोजगारीमा डोर्‍याउन सक्छ र तपाइँ जुन कामको लागि भावुक हुनुहुन्छ तपाइँले निरन्तरता दिनुहुन्छ।
अनुसन्धान, पहुँच र योजना।
यदि तपाईं यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि तपाईंको लक्ष्य एक क्यारियर हो जसले तपाईंलाई तपाईंको विश्वासहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंले अनुसन्धान र योजनाको लागि समय खर्च गर्नु पर्छ। सबै सामाजिक कारणहरूले सजिलै भुक्तान कार्यको लागि अनुमति दिँदैन, तर धेरै गर्छन्। तपाईले विचार गर्नु पर्छ कि कुनले क्यारियरलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। कानूनी वकालत, समुदाय विकास, नीति परिवर्तन र राजनीतिक पैरवी जस्तो जस्ता क्षेत्रहरूमा, मार्गहरू स्पष्ट र अधिक परिभाषित छन्। एउटा कामको लागि विशिष्ट कलेज डिग्रीको आवश्यकता हुन सक्छ र स्वयम्सेवक वा अन्तर्देशीयको लागि पहिले आवश्यकता हुन सक्छ। अक्सर अध्ययन वा प्रशिक्षणको क्षेत्र मार्फत, तपाईंले लिनु पर्ने कदमहरू सिक्नुहुन्छ। यो जहिले पनि काम गरिरहेका पेशेवरहरूसँग कुराकानीमा समावेश गर्दछ, कहिलेकाँही जानकारीमूलक अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट। यस प्रक्रियाको माध्यमबाट, तपाईले कसैलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई सल्लाह दिन्छ। एउटा खेल योजना हुनु महत्वपूर्ण छ: जडानहरू, प्रशिक्षण वा शिक्षा बनाउने, र स्वयम्सेवा अनुभव सम्भवतः यसको एक हिस्सा हुनेछ।
हामी समाजमा यस्तो क्षणमा छौं जहाँ हामी सामाजिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा काम गर्न "सबै" हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य, समुदाय सुरक्षा, सामाजिक न्याय, र आर्थिक समानता सम्बन्धी मुद्दाहरू थिच्दै छन्। तपाईंको क्यारियरलाई एक वाहनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् परिवर्तनको लागि जुन तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
# पेस करियर
Kids4Peace बोस्टन एक कार्यक्रम निर्देशक खोज्दै
नोभेम्बर 1, 2016 जब 0
Kids4Peace बोस्टन एक कार्यक्रम निर्देशक खोज्दै छ। कार्यक्रम निर्देशक विकास, आयोजना, पर्यवेक्षण, र सबै K4PB गर्मी र स्कूल-वर्ष कार्यक्रमहरू मूल्या for्कन गर्न जिम्मेवार छ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
विद्यार्थी कागजातहरूका लागि कल :? ? सामाजिक न्यायका लागि १२ औं वार्षिक मोर्टन ड्युच पुरस्कार
फेब्रुअरी 5, 2016 कार्य चेतावनी 0
कोलम्बिया विश्वविद्यालयको शिक्षक कलेजमा मोर्टन ड्यूच अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संघर्ष समाधान (एमडी-आईसीसीसीआर) सामाजिक न्यायमा उत्कृष्ट स्नातक विद्यार्थी पेपरको लागि १२ औं वार्षिक मोर्टन ड्यूच पुरस्कार प्रायोजित गर्दैछ। मोर्टन ड्यूच, विश्वका प्रमुख मनोवैज्ञानिकहरू मध्ये एक हो जसले द्वन्द्व समाधान र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियरको धेरै वर्षहरूमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। मोर्टन ड्यूच पुरस्कार सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अभिनव छात्रवृत्ति र अभ्यास पहिचान गर्न डिजाइन गरिएको हो। कागजातहरू फेब्रुअरी १ ​​12 मा बाँकी छ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
मार्टिन लुथर किंग जूनियरको बारेमा सिकाउँदै।
जनवरी 17, 2017 CV 0
डा। मार्टिन लुथर किंग जूनियर र नागरिक अधिकार आन्दोलनको पछाडि पाठहरू र संसाधनहरू "मेरो सपना छ" शिक्षणको लागि परिवर्तन द्वारा संकलित र Zinn शिक्षा परियोजना वेबसाइटमा चित्रित। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]